LG V60 ThinQ 5G igwefoto nyochaa: ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ? | Gam akporosis
El LG V60 ThinQ 5G Ọ bụ otu n'ime nzọ kachasị ọhụrụ nke South Korea maka afọ 2020. A malitere ya dị ka ọnụ arụmọrụ dị elu, ọ bụ isiokwu nke nyocha dị mma ma dị njọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ mkpanaka nwere arụmọrụ dị ukwuu, ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha ebe ọ na-abịa na ndị dị ike Qualcomm Snapdragon 865, na ọtụtụ ihe ị ga-enye n'ogo n'ozuzu.
Ọ bụ ezie na ngalaba foto ya dị n’azụ pụrụ iche, ọ naghị aha ihe atụ anya, ebe ọ bụ na nke a anaghị achịkwa iji mee ka ngwaọrụ ahụ bụrụ onye ruru eru ịbanye na nke kacha elu chọrọ 10 nke igwe nwere igwe foto kachasị mma site na DxOMark. Ule nke ikpo okwu mere bu ihe edeputara n'okpuru ... Kedu ka ekwentị si arụ ọrụ nke ọma?
1 LG V60 ThinQ 5G na-enye igwefoto okpukpu atọ nwere ọtụtụ uru, mana yana ụfọdụ adịghị ike
1.1 Kedu ka imere na ule vidiyo?
LG V60 ThinQ 5G na-enye igwefoto okpukpu atọ nwere ọtụtụ uru, mana yana ụfọdụ adịghị ike
DxOMark na-abụkarị ebumnuche mgbe ọ na-enyocha igwefoto igwefoto. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla ka a ghọtara ikpo okwu a na ụlọ ọrụ dị ka akara aka nke ndị ọrụ na ndị ahịa nwere mmasị na ekwentị na-echebara echiche, LG, iji tinye V60 ThinQ 5G na ule ahụ, enyela otu ndị otu ọkachamara otu , ma ekwentị, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ọjọọ, e nyere ọkwa na, maka njedebe dị elu, abụghị nke kachasị elu. N'ezie, ebe ọ bụ na ọ dị oke egwu, ọ dị ala, ma e jiri ya tụnyere mobiles ndị dị n'elu 10.
Anyi na ekwu banyere ya mkpokọta akara na foto foto nke 103Mgbe ọ dị na vidiyo ahụ emeghị nke ọma: ebe a ọ jisiri ike mee akara ọnụọgụ nke 93 ... Iji nwee nghọta doro anya nke ihe nke a pụtara, anyị weere dịka ihe atụ nke igwe dị elu na ogo DxOMark, nke bụ Huawei P40 Pro; Nke a nwere akara 140 na ngalaba foto, yana 105 na ngalaba vidiyo.
Igwefoto LG V60 ThinQ 5G mejupụtara nke 64 MP bụ isi ihe mmetụta nwere oghere f / 1.8, ebe ndị ọzọ bụ oghere 13 MP obosara nke nwere oghere f / 1.9 na ihe ngosi ToF (Oge nke Flight). 0.3 MP. Ngwakọta a na-arụ ọrụ nke ọma, mana na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ na ụfọdụ edemede.
LG V60 ThinQ 5G Igwefoto na vidiyo vidiyo | DxOMark
Site na ngụkọta nke 100 edere na nchekwa data DxOMark, LG V60 ThinQ 5G anaghị asọ mpi na ọkọlọtọ nke ụdị dị ka Huawei, Samsung na Apple, kama rụrụ na a yiri larịị ka ubé okenye ụdị dị ka Samsung Galaxy S9 Plus, ma ọ bụ etiti etiti dị ka ụdị ọhụrụ nke iPhone SE (2020) ma ọ bụ Google Pixel 3a.
Egwuregwu LG mobile na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ dị n'okpuru ọkwa nke ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ, yana enweghị oghere telephoto raara onwe ya nye pụtara LG V60 ThinQ 5G bụ ọghọm mgbe mbugharị.
N'ebe dị mma, ihe oyiyi na-egosi ezigbo ike iche, na-eme ka ekwentị dị mma maka agbapụ na ọnọdụ dị iche iche dị iche iche, na igwefoto dị elu na-enye ohere sara mbara karịa ọtụtụ ndị na-asọ mpi.
N'ehihie gbaa na ezi agba mmeputakwa na magburu onwe ike di omimi | DxOMark
Igwe mkpanaka nke ikpughe ekwentị na-arụ ọrụ dị mma. Ngosipụta na oghere, ọbụlagodi na ihu, na-adị mma, na na ihe ịma aka dị iche-iche, igwefoto nwere ike idowe nkọwa na ma isi na onyinyo nke etiti ahụ, ihe ngosi DxOMark. N’aka nke ya, a na-achịkọta ọkọlọtọ a na - enweta “autofocus” dị ka nke “ziri ezi, mana nwayọ nwayọ.”
Ọ bụ ezie na obosara bụ isi ihe, n'ozuzu oyiyi mma nke àjà ihe ọ wideụ wideụ ahụ dị obosara na-ahapụ ohere maka mmelite. Ngosipụta na ike dịgasị iche iche bụ ihe a na-anakwere, ma ihe nkiri a na-egosipụtakarị na-egosi ụfọdụ mkpụkọ, yana ọkwa nke nkọwa zuru ezu dị obere. Saturation nwekwara ike ịdị obere obere oge na oge ọzọ a na-anụ mkpọtụ na mbara igwe. Balancekpụrụ na-acha ọcha na-adịkarị ezi n'èzí, mana nkedo agba nwere ike ịpụta anya mgbe agbapụ n'okpuru ọkụ ụlọ.
Foto eserese eserese na esighi ike na atụmatụ | DxOMark
Na ọnọdụ eserese, LG V60 ThinQ 5G nwere ike ịdekọ ihe osise dị na bokeh na grajentị blur odi nkpa, ma enwere ohere maka imeziwanye. Mgbanwe dị omimi dị oke, nke nwere ike ibute ebe egbutu na nzụlite na-enwu gbaa, na ịtọpụ isiokwu a abụghị nke a pụrụ ịtụkwasị obi mgbe niile. Ogo nke nkọwa dị na ihu eserese eserese na-adịkarị obere na obere ọkụ, a na-ahụ mkpọtụ na isiokwu ahụ.
Foto nke isiokwu na ngosipụta nke were LG V60 ThinQ 5G | DxOMark
Maka iji foto na abalị ma ọ bụ na obere ọkụ, V60 ThinQ 5G ekwesịghị ịbụ nhọrọ mbụ. Ọ bụ ezie na eserese eserese eserese na-egosi nguzo ọcha dị mma yana ngosipụta dị mma, ogo nkọwa zuru ezu weghaara dị obere na onyonyo na-eme mkpọtụ.
Kedu ka imere na ule vidiyo?
Site na inweta akara vidiyo nke 93, ogo vidiyo zuru ezu na LG V60 ThinQ 5G siri ike n'etiti ngwugwu. Nwalere na ntọala 4K / 30fps, oghere oghere na-abụkarị ihe ziri ezi na ọnọdụ n'èzí na-enwu gbaa na n'okpuru ọkụ ọkụ ime ụlọ, mana ọ na-ada ngwa ngwa na obere ọkụ, na-ebute ihe oyiyi na-enweghị atụ.
Ọnọdụ di omimi nwekwara oke, nke pụtara na ọ kachasị mma iji zere ịdekọ na ọnọdụ dị iche iche dị iche iche n'ihi na nke a ga-eme ka ọpụpụ isi ihe na / ma ọ bụ onyinyo.
Ọnọdụ vidiyo LG na-arụpụta ezi mma n'ozuzu agba na ezi na-acha ọcha itule na-enwu gbaa ìhè na ala ime ụlọ ọkụ, na-egosi DxOMark. Otú ọ dị, ọkwa nke nkọwa dịkarị ala, a hụkwara ụfọdụ ederede ederede na ihe oyiyi na-akpali akpali. A na-achịkwa mkpọtụ kacha mma na onyonyo, mana mgbe ụfọdụ ka a na-ahụ ya na vidiyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Igwefoto nke LG V60 ThinQ 5G abụghị ihe kachasị mma ma hapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ [Nyochaa]
Corning's Gorilla Glass Victus na-eme ka ekwentị gị lanarị nkwụsị 2 mita